Somalia unwu na-ebelata nri ma na-akpata ọnwụ | Network Meteorology
Oké ọkọchị nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-emetụta mba ụwa. Agbanyeghị, na mba ndị ahụ anaghị etolite etolite ma bụrụkwa ndị nwere nsogbu karị, ọ na-emetụta ha n'ụzọ ka njọ.
Na Somalia, ihe ruru mmadụ 196 nwụrụ site na ụnwụ afọ a n'ihi enweghị mmiri. UN Office for Humanitarian Coordination (OCHA) adọwo aka na ntị ka oke ọkọchị siri sie ike ma manye ndị ọchịchị ịkọwa ọkwa nke "ọdachi mba."
1 Oké ọkọchị na-akpa Somalia
2 Shortkọ mmiri na ọrịa na-arị elu
Oké ọkọchị na-akpa Somalia
N'ihi ụkọ mmiri, ọnụ ahịa otu mmụba a na-amanye obodo ịga mmiri iyi egwu nke mmiri anaghị a drinkụ ma ọ bụ na-adịghị agwọ ya. Ihe ndị a niile na-eme ka ohere ibute ọrịa dịka ọgbụgbọ na ọnyụnyụ.
Site na mmadụ 196 gburu na mpaghara iri na otu nke mba ahụ na ihe karịrị mmadụ 7.900 ndị ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ metụtara, ndị ọchịchị ekwupụtala ọnọdụ ọdachi mba.
Shortkọ mmiri na ọrịa na-arị elu
Dị ka ndị ọchịchị Somalia si kwuo, ọnọdụ na-akawanye njọ kwa ụbọchị na mpaghara a. Otu ihe ịma aka kasịnụ bụ mmachi ohere ịnweta enyemaka mmadụ n'ihi ọnụnọ nke ndị otu egwu egwu nke Somalia nke Al Shabab, nke na-achịkwa mpaghara buru ibu na ndịda na etiti mba ahụ.
Ihe dị ka nde ndị Somalia 3 ga-anọ n'ọnọdụ ọnọdụ nri na June 2017 na nso nso ụnwụ n'ihi oke ọkọchị edenyere n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya, dị ka UN si kwuo.
Ka mmiri ozuzo na-ebelata na Somalia Nri nri na-ebelata 70% na mpaghara ụfọdụ nke mpaghara. Nke a na - ebute ọnụ ahịa na ụnwụ nke na - eyi ahụike nke mmadụ niile egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Droughtkọ mmiri ozuzo na Somalia na-ebelata nri ma na-egbu ndị mmadụ